Kullamada laga ciyaari doono koobka adduunka maanta iyo caawa, xilliyada la daawan doono iyo qaabka… | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Kullamada laga ciyaari doono koobka adduunka maanta iyo caawa, xilliyada la daawan...
Kullamada laga ciyaari doono koobka adduunka maanta iyo caawa, xilliyada la daawan doono iyo qaabka…
Illaa iyo hadda sideed xul ayaa usoo gudbay wareegga 16-ka kuwaas oo xaqiijiyay booska ay kusoo baxeen iyo xulka ay la ciyaari doonaan wareegga 16-ka.
Xulka Uruguay oo wajahaya Portugal, Russia oo la ciyaaraya Spain, France iyo Argentina oo hardami doona iyo Croatia iyo Denmark oo is arki doona ayaa uu sameysmay isku aadkooda.
Xulka kaalinta 1-aad uga soo baxa Group E ayaa ku dhici doona xulka kaalinta labaad ee Group F, halka kaalinta koowaad ee Group F uu arki doona kaalinta labaad ee Group E.
Group F ayaa la hor ciyaari doonaa waxaana kullamdooda oo hal waqti soo galaya la daawan doonaa 5:00pm galabta.
Xulka qaranka South Korea oo gebi ahaan isaga haray koobka adduunka ayaa la ciyaari doona xulka Germany kaasoo u baahan inuu guuleysto si uu u xaqiijiyo usoo gudbidda wareegga 16-ka xul, halka Mexico oo goor hore soo baxday ay wajahi doonto xulka qaranka Sweden, kaasoo isna u baahan guul si uu suoo gubo.
Haddii Germany ay adkaato waxa ay muran la’aan tiigsan doontaa wareegga xiga.
Waxaa is weydiin mudan haddii Sweden ka adkaato Mexico, Germany uu ka adkaado South Korea, waxaa min lix dhibcood yeelan doona Sweden, Mexico iyo Germany.
Si ay usoo gudbaan laba ka mid ah saddexdooda, waxaa lagu kala saari doonaa farqiga goolasha ay mid walba heysato.
Xulka heysta farqi goolal oo ka yar labada kale ayaa tartanka isaga hari doona, haddii ay halkaas isku mid ka noqdaan, waxaa lagu kala bixi doonaa dhaqan wanaag iyadoo lagu qiimeynayo caalamadaha Hurdiga iyo casaanka.
Haddii ay noqoto in lagu kala saaro kullamada ay is arkeen, saddexdooda mid walba mid ayuu guul ka gaaray.
Sidaas darteed waa group aad u halis badan in la qiyaaso cidda soo bexeysa, marka laga reebo in Germany ay guul gaarto Mexico-na ay guuleysato ama bareejo la gasho marka ay la ciyaarto Sweden.
Waxaa Group-kan natiijadiisa ka war sugayo xulalka ku jira Group E kuwaas oo kullamadooda la ciyaari doono 9:00pm caawa.
Xulka qaranka Brazil ayaa si aad ah isha loogu hayaa, kaasoo haddii laga adkaado isla markaasna Switzerland ay dhibic hesho daaqadda isaga bixi doona.
Hadda waxaa hor kacaya Groupkan Brazil oo afar dhibcood leh inkastoo ay la wadaagto xulka Switzerland.
Brazil waxa ay la ciyaari doontaa Serbia kullan aad u adag, haddii Serbian-ku ay guuleystaan waxa ay muran la’aan iska xaadirin doonaan wareegga xiga ee 16-ka, natiijo walba oo ka dhacda kullanka kalena Sameyn kuma yeelan doonto.
Balse Brazilian-ku waxa ay u baahanyihiin dhibic qura si ay usoo gudbaan, sidoo kale haddii ay adkaadaan waxa ay kaalinta koowaad uga soo bixi doonaan Groupkan E inkastoo Switzerland ay wax ka go’aamin karto.
Switzerland iyo Brazil haddii ay wada adkaadaan, labadooda ayaa soo gudbi doona waxaana Farqiga goolasha ay heystaan ay go’aamin doontaa midka koowaad ah.
Costa Rica ayaa ah xulka keliya ee Groupkan isaga haray, kaasoo labadiisa ciyaarood ee hore qasaaray, caawana waxa ay la ciyaari doonaan Switzerland oo rajo fiican ka leh usoo bixidda wareegga xiga.